Ọnụ Ala Kpoo ọnụ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ọnụ Ala Kpoo ọnụ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ọnụ Ala Kpoo ọnụ)
Defogger Mberede Anya ụgbọ ala
P roduct Description Idebe maka mirror azụzụ kpo oku. Nwee obi ụtọ mgbe nile iji mee ka enyo gị kpuchie ma mee ka ọ ghara imebi ya. Nchekwa iji: A na-arụpụta ihe ntanetịpụta site na ngwaọrụ ndị dị oke mma dịka ọkọlọtọ ụwa si dị.Ọghaghị njide onwe onye na-ejide onwe ya ọ bụghị nanị maka ikpo ọkụ, ma gbochie mmiri si na...
Ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ maka Ịkụ nzọkpụ na nke EC
Ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ maka Ịkụ nzọkpụ na nke EC Ọkpụkpụ Shiatsu sitere na Eshia ma na-agụnye ịhịa aka n'ahụ na ntụrụndụ na mkpịsị aka na mkpịsị aka. Shiatsu massage ngwaahịa na-eṅomi nke a ije. Akwụkwọ Ụgbọ mmiri: a) Maka usoro nlele, anyị na-eji ozi dịka DHL, UPS, TNT, Fedex, EMS, onye ahịa nwekwara ike...
Ihe nkiri kpụ ọkụ n'ọnụ maka Ntọala
Ọkpụkpụ Shiatsu sitere na Eshia ma na-agụnye ịhịa aka n'ahụ na ntụrụndụ na mkpịsị aka na mkpịsị aka. Shiatsu massage ngwaahịa na-eṅomi nke a ije. Akwụkwọ Ụgbọ mmiri: a) Maka usoro nlele, anyị na-eji ozi dịka DHL, UPS, TNT, Fedex, EMS, onye ahịa nwekwara ike itinye onye ozi ahụ. b) Maka usoro buru ibu, anyị nwere...
snow na-ekpo ọkụ okpukpu ọkụ maka ụgbọ ala
Anyị nwere ekele maka mmasị gị na ngwaahịa anyị Biko nye anyi ndụmọdụ n'okpuru Ama. maka amaokwu anyị ma kpọtụrụ anyị ka ịchọta ihe ngwọta kacha mma gị. size max okpomọkụ, agba ọkụ ele anya Ngwa N'elu Snow na-agbaze ikpo ọkụ nwere ọtụtụ ojiji, dị ka snow na-agbaze mkpuchi ụgbọ ala, okporo ụzọ snow melting,...
Mkpụrụ ụgbọala moto moto na-agba ọkụ
Nkọwapụta ngwaahịa Ọ bụrụ na ị na-achọ nrịbama ahụ-ọ bụghị nanị na ọ dị mma na ọgba tum tum gị, ma na-enyekwa gị nkasi obi ịchọrọ, ọkpụkpụ ụgbọala anyị na- ekpo ọkụ bụ kpọmkwem ihe ị chọrọ. 100% ohuru na elu àgwà na asọmpi ego Ọ bụrụ na aka oyi na-eme ka ndụ gị bụrụ ihe nhụjuanya mgbe ị nọ n'okporo ụzọ, ọ bụ oge...
Egwuregwu kpụ ọkụ n'ọnụ maka mgbidi moto
Nkọwapụta ngwaahịa: Nkà na ụzụ: 1. Li-na batrị: 3.7V 2600mA 2. Okpomọkụ: 38-58 ogo 3. Oge ọrụ: Ihe dị ka awa anọ na ike zuru oke 4. Size: SML XL 5. Ntinye chaja: AC 100-240V na EU ma ọ bụ USA Atụmatụ: 1.Ọdịmma ihe onwunwe na ndụ ogologo oge 2.Nkeghari akuku nke ọkụ, ikpo ọkụ ọkụ, ịzọpụta en.ergy. 3.Nchịkwa Nchekwa...
Ọnụ Ala Kpoo ọnụ Ọnụ ala kpoo ọnụ Ọkụ Na-ekpo ọkụ Ọkụ aka na-ekpo ọkụ Ike Ọkụ Na-ekpo ọkụ Ụgbọ ala na-ekpo ọkụ Ejiri ọkụ kpoo ọkụ Ọkpụkpụ aka na-ekpo ọkụ